Uhlamvu Lwemali Lweviki - Syscoin (SYS) | Klever Ezezimali
Isungulwe ngo-2014, i-Syscoin (SYS) iye yathuthuka ngokuqhubekayo ukuze ivumelane nezidingo zezikhungo namabhizinisi kude kakhulu nobubanzi balokho okunikezwa ngamanye ama-blockchains amakhulu esikhaleni se-crypto.
I-Bitcoin akuyona nje eyokuqala, kodwa ngaphandle kokungabaza i-blockchain ephephe kunazo zonke ekhona uma kubhekwa ukwamukelwa kwayo ngobuningi nokuzinikela embonini yezimayini yobufakazi bomsebenzi, ehlanganisa imbulunga yonke.
I-Syscoin isizakala ngale modeli yezokuphepha ngokusebenzisa izimayini ezihlanganisiwe, eziphuma ezinsizeni esezinikezelwe ekuvikeleni inethiwekhi ye-Bitcoin. Uma ingaphukile, kungani uyilungise? Lobu budlelwano buvumela iSyscoin ukuthi ingajabuleli kuphela i-hashrate yesibili ephezulu kakhulu kunoma iyiphi i-crypto, kodwa futhi wenze kanjalo ngaphandle kokumosha noma yimaphi amandla engeziwe.
I-Syscoin ihlala ithembekile ezinhlosweni zasekuqaleni zika-Satoshi Nakamoto, enikeza ukuthengiselana okushibhile, okuvikelekile ngendlela eyamukelekile. Kodwa-ke, umbono wayo manje ufinyelela ezindaweni ezingasetshenzisiwe zalokho okungenzeka endaweni eyi-Web 3.0, ukwakha ngokuphumelelayo ingqalasizinda ezodingeka ukuze amabhizinisi angene ku-blockchain ngobuningi.
Le mikhawulo yale ngqalasizinda izoba umcabango wekhoda kuphela ngenxa ye-giant leap forward eba iphayona ngaphakathi kwe-Network-Enhanced-Virtual-Machine yabo noma i-NEVM. Idizayinelwe ukwenza lula izinkontileka ezihlakaniphile ezifana ne-Ethereum, i-NEVM ye-Syscoin izokwenza kanjalo ngemodeli yokuphepha yobufakazi bomsebenzi we-Bitcoin, ihlanganise ngempumelelo izici ezinhle kakhulu ngayinye. Le ndlela yokuziphendukela kwemvelo nayo yakhiwa kucatshangelwa umthethonqubo.
Isendlalelo sesisekelo se-Syscoin blockchain sizohlala sihlukanisiwe, kodwa labo abakhetha ukwakha phezu kwaso banenkululeko yokusungula izilawuli zokulawula, ngaleyo ndlela banikeze indawo eyodwa kulabo abayidingayo kanye nenkululeko yokungenzi kulabo abangayidingi.
Nakuba inguqulo yokuqala ye-NEVM izohlinzeka ngezinkontileka ze-Bitcoin ezivikelekile ngesivinini esiqhathaniswa nenethiwekhi ye-Ethereum, isisekelo siyakhiwa ukuze ekugcineni sivumele isivinini esifinyelela ku-4 million ukuthengiselana ngomzuzwana.
Konke lokhu kungase kubonakale kukukhulu, futhi kunjalo ngempela. Naphezu kwalokho, izisekelo azikhohliwe. Ngisho nasemhlabeni wonke, kusetshenziswa izigidi zokuthengiselana ngomzuzwana, akukho nokukodwa kuzo okuzodlula ingxenye yesenti ukuze kwenziwe.
Ukonga okunjalo akusizi izinhlangano kuphela, kuyashintsha ukuphila kumabhizinisi amancane asebenza emaphethelweni aphansi angakwazi ukonga ezindlekweni zokucubungula amakhadi esikweletu, noma izimali zokuthumela ezingasetshenziswa kangcono ezandleni zabamukeli bawo ezweni elikude, ingasaphathwa eye-social media-savvy NFT trader.
I-Syscoin iklanywe kusukela kuzinga eliyisisekelo ukuya phezulu ukuze kugcinwe izinkokhelo zokusebenza ziphansi futhi ivumele abasebenzisi ukuthi babambe iqhaza ku-ecosystem ngaphandle kwezinkinga zezimali.
Ukuphinda, i-Syscoin ihlinzeka ngokuhlangana phakathi kokuphepha kwe-Bitcoin okungcono kakhulu kanye nezifiso zebhizinisi ze-Ethereum, konke ngezindleko eziphansi kakhulu kanye nesivinini esiphezulu kakhulu. I-blockchain yabo kanye ne-NEVM ikhethwe ozakwethu abaningi ukuthi bathuthukise imikhiqizo yabo kanye nezinsizakalo ukuze bahlangabezane nezidingo ezihlukahlukene kanye nezimfuno kulo mkhathi okhulayo, futhi esifisweni sethu sokuqhubeka nokuhlinzeka amakhasimende ethu kude nekusasa akungabazeki ukuthi kungani. Klever ukhethe i-Syscoin Platform ukuze enze okufanayo.
Ukubambisana no Klever
Ukuyiqinisa ngokuqhubekayo ngo-Ephreli 2021, iSyscoin ibambisane nayo Klever, isikhwama semali ye-cryptocurrency esinezinhlamvu eziningi esizoba isikhwama semali esiyinhloko se-ecosystem yayo.
Ngaphansi kwalobu budlelwano, Klever isibe isikhwama semali esiyinhloko se-SYS ne-Syscoin Platform Tokens (SPTs) ngemva kokwethulwa kwe-LUX mainnet.
Klever I-ecosystem izophinde ingene ezicini eziningi ze-Syscoin ezihlanganisa i-Z-DAG, i-AuxFees, ne-Notary, kanti KleverAbasebenzisi bazothola ukufinyelela kwevelu namandla e-Syscoin.
I-SYS ibheke ukwakha amabhuloho phakathi kwama-blockchains, amazwekazi kanye nezifunda, futhi inike amandla wonke umuntu emhlabeni wonke ukuthi azibhange ngokusebenzisa Klever Wallet.
Ngaphandle kwe Klever, I-Syscoin inobudlelwane obusemthethweni ne-Blockchain Foundry, i-Binance, i-TrustToken, i-Komodo, i-Decentralized Identity Foundation (DIF), i-Microsoft Azure, i-International Token Standardization Association (ITSA) nokuningi.
NgoJanuwari 2020, i-Syscoin yavula iphrothokholi entsha yebhuloho ne-Ethereum blockchains. Eyokuqala yohlobo lwephrothokholi isebenzisa ubufakazi be-cryptographic phakathi kwama-blockchains ukunika amandla ibhuloho elingathembeki lokusebenzisana kwamathokheni.
Ngemva kwalokhu, amaphrojekthi e-Ethereum akhona angakwazi ukusebenzisa ngokunenzuzo ukuthengiselana okusheshayo, okuphansi kwe-Syscoin ukusiza amaphrojekthi afinyelele ngaphezu kwalokho inethiwekhi ye-Ethereum ekwazi ukuyenza okwamanje. I-Syscoin ne-Syscoin Platform Tokens nayo izokwazi ukusebenzisa ibhuloho, inikeze amandla amaphrojekthi we-Syscoin ukuthi asebenzise amakhono enkontileka ye-Ethereum ehlakaniphile kanye ne-wallet ecosystem.
I-Syscoin isebenzisa uhlelo lokuhlanganisa lwezimayini. Ngalokhu, i-SYS inikeza inketho yokuzuza uhlamvu lwemali ezengeziwe ngenkathi uzimayini ku-blockchain engaphezu kweyodwa ene-algorithm yezimayini efanayo ngesikhathi esifanayo. Lokho kusho ukuthi abavukuzi be-Bitcoin bangaphinda basebenzise amandla abawasebenzisela izimayini ze-Bitcoin futhi bawasebenzise ku-Syscoin futhi bangase bathole i-Syscoin.
Ngenxa yalokhu, izinombolo ezinkulu zabavukuzi be-BTC bezibophezele ku-SYS. Njengoba abavukuzi kwakungadingeki banikele amandla e-hashing ku-SYS, futhi babekwazi ukwabelana ngezimayini ababevele bezenza ne-BTC.
I-hashrate ye-Syscoin okwamanje ingama-3333.137 PH/s, okucishe kube ingxenye eyodwa kwezine ye-hashrate ye-Bitcoin. Inzuzo enkulu yokuhlanganisa izimayini ukuthi kuvumela ama-cryptocurrensets ane-hash ephansi ukuthi akhuphule ngokumangazayo umthamo wawo we-hashing wenethiwekhi ngokungena ezimalini ezimbiwa kabanzi.
I-Syscoin yengeze isici sokukhishwa kwamathokheni endaweni yayo evumela abasebenzisi ukuthi bakhe izinhlelo zokwethembeka ezisekelwe kumathokheni, izinhlelo zamaphuzu okuklomelisa, noma baqhube iminikelo yabo yemali yokuqala (ama-ICO) ku-Syscoin blockchain.
Amathokheni afakwe ku-Syscoin blockchain angafakwa umbala noma asayinwe ngedatha eyengeziwe eyingqayizivele. Lokhu kuvumela abasebenzisi be-Syscoin ukuthi bahlanganise i-SYS ngokuqondile nokufakwa uphawu kwebhizinisi labo, noma basebenzise amathokheni e-SYS njenge-avatar ezindaweni ezibonakalayo.
Ukudluliswa kwempahla ngokushesha
I-Syscoin iphinde ibe nomsebenzi wokudlulisa amafa osheshayo, onamacala okusebenzisa aqinile emhlabeni wangempela angase aphazamise kakhulu. Ukudluliswa kwempahla ngokushesha kungavumela abasebenzisi benkundla yemakethe yokuqagela ukuthi bathole imali futhi baphume kumakhasino aku-inthanethi ngaphandle kokulinda izikhathi ezinde zokuqinisekisa noma ukudluliselwa kwebhange kwe-fiat okuvamile, noma kuvumela abasebenzisi ukuthi basebenzise i-SYS ekuthengeni okusheshayo kwangaphakathi kwegeyimu njengamabhokisi e-loot noma amandla phezulu.
Ukuthuthukiswa komkhiqizo oqinile we-Syscoin ukwazile ukudala i-cryptocurrency enamandla futhi ebanzi ngokwezinhlelo zokusebenza ezingase zibe khona.
Ngendlela efanayo, Klever ibihamba phambili ihlinzeka ngezinsiza eziningi ezahlukene, enye iyisikhwama se-crypto esivikeleke kakhulu, esisekela ama-blockchain amakhulu emhlabeni.
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-3, Kleverizinkundla abasafufusa Klever I-blockchain, Klever Exchange, Futhi Klever I-Hardware Wallet izophazamisa lo mkhakha ezinyangeni neminyaka ezayo.